Ziyahlangana izinkunzi ngale mpelasonto e-FNB stadium | News24
Ziyahlangana izinkunzi ngale mpelasonto e-FNB stadium
ISITHOMBE:sithunyelwe Kulindeleke ukuba kukhethe ukhethi emqhudelwaneni we Kaizer Chiefs ne Orlando Pirates ngempelasonto.
KUKHONA izisho ezithi uma kuhlangene izinkunzi kusiphuka izidindi nomhlabathi ubheke phezulu.
Emalokishini amaningi aseMzansi uke uzwe kuthiwa kuzosuka amaphepha kusale amakhadibhodi noma bethi impela iyolala ibonene. Impela iyohlangana iphinde ihlukane.
Cishe zonke lezizisho noma-ke izaga ziyobe zizifakazela ngalo Mgqibelo wakusasa lapho kuzobe kutholene khona izingwazi zebhola zaseMzansi nezinkunzi zaseSoweto iOrlando Pirates neKaizer Chiefs.
Kukhona izinto ezimbalwa ezibalulekile ngalomdlalo. Okokuqala, bobabili abaqeqeshi uEric Tinkler weBhakaBhaka no Steve Komphela abakazinzi kahle-hle ezikhundleni zabo. Kukhona imibuzo elokhu ibuzwa ngabalandeli ethi mhlawumbe kungenzeka yini ukuthi lamaqembu makhulu kakhulu futhi athanda ukubasinda.
Kubuywe kusolwe indlela ababophela ngayo izikimu zabo. Lokho sekudale abanye abalandeli bePirates bazibuze bengaqedi emva kwezindlu ukuthi ngempela ngempela ngabe uTinkler uyazithela yini isikimu sakhe. Sekunezinsolo noma amahemu hemu alokhu ethi kunesandla soboya noma sesithathu esidonsa amatomu buqamama. NgaseMaKhosini kusolakala ukuthi uKompela usadideka ukuhlanganisa iqembu lakhe elingashaya kwasani ngoba phela ayikho inhlobo yomdlali engekho eNaturena.
Ngempelasonto edlule amaBhakaBhaka ahlazwe yiJomo Cosmos ezivelela ehlathini futhi elokhu ilwela izembe le phansi. “Kukhona okunuka santungwana emsamo futhi-ke izinsolo siyazibona,”kusho omunye wabalandeli abaziwayo eKwaZulu Natal kodwa ongafunanga igama lakhe livele. Kanti naseNaturena akuhambanga kahle ngalempelasonto esivela kuyona lapho behlulwe yiPlatinum Stars ngo 2-1 eKapa. Phela kulomdlalo AmaKhosi ashaye kuqale igoli kodwa iDikwena yakwazi ukulinganisa yaze yashaya neGoli lokuwina ngasekupheleni komdlalo. Umbuzo ke olokhu ubuzwa abalandeli bezimpofana ukuthi kusukela nini ukuthi iChiefs ifake igoli kuqala kodwa igcine idliwe.
Izinkalakatha ezake zadlalela lezinkunzi zithi umdlalo wangoMqgibelo uzobe okwelinye iqophelo futhi yiwona ozocacisa ngekusasa lalabaqeqeshi.
Owayengukaputeni weBhakaBhaka uEdward Motale uthi yena uyavuma ukuthi umqeqeshi wezimnyama uhleli phezu kwengcindezi ngoba akukho lula ukuqeqesha iqembu elikhulu njengePirates. “Mina ungangizwa kabi my Outie, mina angisho ukuthi usengcupheni yokuxoshwa kodwa ngithi konke kubukeka kusinda ngasohlangothini lakhe,”kusho uMotale.
UMotale uthi yena ucela abadlali kebadlale nje kahle futhi badlalele ukuwina, bangalokhu bebheka izinto ezishiwoyo nezenzeka ebhentshini. “Kwesinye isikhathi kuke kufanele nivele nizimele futhi nizitshele ukuthi namhlanje siyodla iChiefs,”kusho uMotale. Nenye inkunzi yeBhakaBhaka eyake yaba ngukaputeni kuyo uGavin Lane osezinze eThekwini uthe: “NgoMgqibelo kuyobe kungadlalwa futhi kunyathelwana. Mina ngithi iBucs izoyidla iChiefs.”
Owayengukaputeni weKhosi uLucas Radebe uthi yena usola ukulingana kwamagoli phakathi kwamaqembu womabili.
Owake waba unozinti kwiChiefs manje oseqeqesha onozinti kwiMaritzburg United uArthur Baartman uthe yena: “Nakanjani Amakhosi angayidla iPirates.”